“ Auggie” သည်နာမည်အကြီးဆုံးသောနာမည်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသြစတြေးလျ Shepherd Corgi ရောစပ်မှုသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သည်။ သင်ကချစ်စရာကောင်းပြီးအလုပ်များတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ဖတ်ပါ။
Australian Shepherd German Shepherd ရောစပ်ခြင်း - အကောင်းဆုံးခွေးလား။
သငျသညျအလွန်အမင်းတက်ကြွစွာနှင့်နီးပါးဘာမှလုပျနိုငျရဲ့အဆုံးစွန်ကျွဲနွားခွေးအဘို့အလိုက်ရှာအပေါ်နေလျှင်? Australian Shepherd German Shepherd ရောမွှေပါ။
Is‌ ‌an‌ ustr သြစတြေးလျ he သိုးထိန်း usHusky‌ ‌mix‌ ‌the‌ ‌right‌ ‌dog‌ ‌for‌ ‌you?
ဤသည် pooch နှစ်ခုအလုပ်လုပ်ခွေးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည် - တ ဦး တည်းတစ် ဦး, တစ် ဦး ကျက်စားသူတစ် ဦး စွတ်ဖားဆွဲ - ဆွဲစက်ဖြစ်ပါတယ်။ လုံ့လရှိသူသြစတြေးလျ Shepherd Husky ရောနှောမှုကိုတွေ့ဆုံပါ။
အလုပ်လုပ်ခွေး prodigy ဝယ်ဖို့စဉ်းစား? ဤသည်သည်သင်တို့အတွက်သင့်လျော်သောခွေးဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ရန်သြစတြေးလျသိုးထိန်းဓာတ်ခွဲခန်းမှကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။
သြစတြေးလျသိုးထိန်း - ဒီခွေးမွေးမြူခြင်းမှအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်မည်နည်း
Australian Terrier: ဒီခွေးမျိုးစပ်အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
အဆိုပါ Basenji မုဆိုးပေမယ့်ဂန္မြင်ကွင်းသို့မဟုတ်ရနံ့ hound မဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟိုအာဖရိက၏ကုန်းပြင်မြင့်တစ်ခုဖြစ်သောဘာဆန်ဂျီသည်တည်ရှိဆဲရှိသက်တမ်းအရင့်ဆုံးမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Basenji အမျိုးအစားခွေးများကိုရှေးဟောင်းအီဂျစ်အနုပညာတွင်တွေ့ရသည်။ ခေတ်သစ်သမိုင်း၏သမိုင်းကြောင်းသည်နှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းတွင် ... ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Low-key ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - သင်သစ္စာရှိသော Basset Hound အကြောင်းကြားဖူးလား။
လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နိမ့်သည့်အလုပ်လုပ်နေသောခွေးကောင်လေးကိုသင်အလိုရှိသလား။ နားရွက်ရှည်များနှင့် Basset Hounds သည်သင်၏စာရင်းတွင်ပါဝင်သင့်သည်။
၃၆ Basset Hound အရောအနှောများကိုယခုအချိန်တွင်ချစ်မြတ်နိုးလာပါလိမ့်မည်
Basset Hounds သည်အထူးသဖြင့်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်သန့်စင်သောဗားရှင်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အတိအကျမဟုတ်ပါ။ အဖြေ - Basset Hound ရောစပ်မှုစာရင်း။
ဒီဇိုင်နာခွေးတွေကိုကြိုက်လား ချစ်စရာကောင်းသော၊ ဆော့ကစားခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းသောမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကောင်လေးတစ်ကောင်လော။ ထို့နောက် Beagle Boxer ရောနှောထားသော AKA Beabull ထက် ပို၍ မကြည့်ပါနှင့်။
လုံ့လရှိသူ Beagle သည်အကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်သောအနုပညာရှင်လား။
ဒီပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတောက်ပနေသောခွေးကလေးကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ၊ ကျန်းမာရေးပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော Beagle အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုရှာဖွေပါ။
ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော Beagle Basset Hound သည်မိသားစုခွေးတစ်ကောင်ရောလား။
အမဲလိုက်အဖော်ရှာနေတာလား။ အဆိုပါ Beagle Basset Hound ရောနှော (AKA Bagle Hound) အဆုံးစွန်ရနံ့ hound ပါလိမ့်မယ်! ဒီကြက်တူရွေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အားလုံး Beagle ဓာတ်ခွဲခန်းရောနှောအကြောင်းကို
Beagle Lab ပေါင်းစပ်မှုသည်စမတ်ခြုံနွယ်ဖြစ်ပြီးသူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲတမ်းလေ့လာလိုသည်။ ဒီကစားစရာခွေးဟာသင့်မိသားစုအတွက်အဆင်ပြေမလားရှာကြည့်ပါ။
အဆိုပါ Beaglier ခွေး - ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး Beagle လက်ဝါးကပ်တိုင်?
Beaglier သည် Beagle နှင့် Cavalier King Charles Spaniel တို့အကြားစွမ်းအင်ပြည့်ဝ။ သစ္စာရှိသည့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဒီဇိုင်နာ pooch အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သနည်း
အဆိုပါမုတ်ဆိတ်မွေး Collie - ဒီခွေးမွေးမြူမျှော်လင့်ရန်အဘယ်အရာကို
အဆိုပါ Beardie ဟုချစ်ခင်ကြသော Bearded Collie ကိုစကော့တလန်တွင်နွားမွေးမြူရေးခွေးအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှကျွန်းများရှိပိုလန်အနိမ့်သိုးနွားကောင် (Polski Owzcarek Nizinny) နှင့် Komondor ကဲ့သို့ဥရောပတိုက်ကြီးမှနွားခွေးများသည်ဘိုးဘေးဘီဘင်များဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လွတ်လပ်သောလုပ်သားတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ... Read more
အကယ်၍ သင်သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအလုပ်လုပ်ကိုင်သူနှင့်ခွေးပတ်ပတ်လည်ရှိခွေးနှစ်ကောင်ကိုရောစပ်လိုက်လျှင်သင်ဘာရမလဲ။ ဒီဇိုင်နာခွေး, ဘယ်လ်ဂျီယံ Malinois ဂျာမန်သိုးထိန်းနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ဤတွင်ဖတ်ပါ။
Poofy and goofy သည် Bernese Mountain Dog Poodle ရောနှောခြင်းသို့မဟုတ် Bernedoodle သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောစပ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒီမှာသူတို့အကြောင်းကိုပိုသိပါရစေ။
ဘာနိနက်တောင်ခွေး - ဒီခွေးမျိုးဆက်မှဘာမျှော်လင့်ရမလဲ
Bernese Mountain Dog ဟူသောအမည်မှာဂျာမန်“ Berner Sennenhund” ၏အကြမ်းဖျင်းပြန်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီးစာသားအရ Bernese Alpine Herdsman ၏ခွေးဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖောက်ရဲ့မူလအမည်, ဤလယ်ယာခွေးဝယ်ယူရောင်းချခဲ့သည်ရှိရာတည်းခိုခန်းပြီးနောက်, Durrbachler ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်မီမျိုးပွားမှုသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘာ့န်းရှိကျေးလက်ဒေသတွင်တွေ့ရသောခွေးများမှပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်ပြီး ... Read more
Golden Retrievers အတွက်အကောင်းဆုံးခွေးစာအတွက်လမ်းညွှန်
သင်၏ Goldie အားမည်သည့်အစားအစာနှင့်မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားပေးမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခက်အခဲရှိပါသလား။ ဤဆောင်းပါးသည် Golden Retrievers များအတွက်အကောင်းဆုံးခွေးအစားအစာကိုသိရန်သင်၏နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင့်ခွေးကလေး၏အစာအိမ်ပေါ်တွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရည်အသွေးမြင့်မားသောခွေးအစားအစာများကိုကျွန်ုပ်တို့ခူးဆွတ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားလာနေသောခွေး၏အာဟာရလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
labrador retriever & သိုးထိန်းရောနှော
ခွေးပေါက်ကလေးများအတွက် pitbull အမည်များ